» माझी बस्ती बासीहरुको भयो यस्तो बिचल्ली !माझी हरुको चीत्कार,कि ऋण तिरिदेउ ! कि घर फिर्ता लैजाउ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) माझी बस्ती बासीहरुको भयो यस्तो बिचल्ली !माझी हरुको चीत्कार,कि ऋण तिरिदेउ ! कि घर फिर्ता लैजाउ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
माझी बस्ती बासीहरुको भयो यस्तो बिचल्ली !माझी हरुको चीत्कार,कि ऋण तिरिदेउ ! कि घर फिर्ता लैजाउ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
माझी बस्तीबासी हरुको भयो यस्तो बिचल्ली !माझी हरुको चीत्कार,कि ऋण तिरिदेउ ! कि घर फिर्ता लैजाउ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ ।काठमाडौ । न्यूज २४ टेलिभिजनवाट भर्खरै विदा लिएका चर्चित टेलीभिजन प्रस्तोता रवी लामिछाने विरुद्ध ठगीको आरोप लागेको छ।
भाषण र भिजन दुवैका आधारमा विजेता छनोट गरिने र प्रतिस्पर्धीबाट ‘द लिडर’ का विजेतालाई काठमाण्डौमा अपार्टमेन्ट, गाडी र २० लाख रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिने भनिएको थियो । आयोजकले कार्यक्रमले एक कुशल र असल राजनीतिक नेता जन्माउने दाबी गरेको थियो।